बिजुली परिपत्र देखे प्रक्रिया फसल काठ काटन कार्य, साथै काठ खाली काटन, प्लाईवुड लागि दशकसम्म Woodworking उद्योग प्रयोग गरिएको। पहिले, यो उपकरण फ्रेम र भारी मोटर मात्र एक भारी एकाइ छ। आधुनिक उदाहरणहरू धेरै मोबाइल प्रयोग गर्न सजिलो छन् अपरेसनमा, डिस्क आरी को नयाँ पुस्ता रूपमा सामान्यतया हल्का मोटर संग हात छन्। उदाहरणका लागि, घरेलू उपकरण 2.54किलो देखि वजन सक्छ।
म बिजुली डिस्क देखे। डिजाइन विशेषताहरु
तेर्सो मोटर शाफ्ट, को देख्यो ब्लेड मा माउन्ट छ जो: यो उपकरणले बरु सरल डिजाइन छ। डिस्क आवश्यक निश्चित आवरण शीर्ष र तल सार्ने मा बन्द गरिएको छ। बिजुली परिपत्र जो घुमाइयो सकिन्छ 450मंच-आधार, चिप्स लागि चूषण उपखाडी, को स्टार्टर वाल्व र ह्याण्डल छन्। त्यो सम्पूर्ण डिजाइन हो।
प्लेटफर्म को सामने भाग कट को लाइन एउटा सूचक हो। केही मोडेल बिजुली आरी को कि नेत्रहीन काटन को स्थान निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ निगरानी गर्न विन्डो साथ सुसज्जित शरीरमा। मोबाइल लाइन पक्ष बोर्ड को किनारा बाट predetermined दूरी मा सही काटन प्रदर्शन गर्न पुस्तिका छ। सबै माथि बाहेक, तपाईं पनि कटौती को गहिराई समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै सुविधाहरू काटन प्रक्रिया धेरै सुविधाजनक छ बनाउन।
बिजुली परिपत्र देख्यो। प्रजाति
यी साधन इरादा गर्दै छन्3भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
प्रत्येक समूहका उपकरण को मुख्य विशेषताहरु स्रोत लगातार संचालन र काटन गहिराई छन्।
तर हामी तुलना यदि व्यावसायिक र घरेलू बिजुली परिपत्र देख्यो, यी मापदण्डहरू वस्तुतः समान हुनेछ। र यसले हामीलाई यो वर्गीकरण बरु पारंपरिक छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गर्न अनुमति दिन्छ। शक्ति आरी डिस्क प्रकार विभिन्न ब्रान्डहरु को सेवा क्षमताहरु समायोजन समावेश रक्षा इलेक्ट्रनिक्स। विशेष मा, मानक ब्लेड डिजाइन आवश्यक अधिक भार विरुद्ध सुरक्षा संयन्त्र, को देख्यो ब्लेड र चुच्चो परिक्रमणहुनेकिसिमकोगती समायोजन उपकरणको Jamming हुनु पर्छ। केही मोडेल एक दुर्लभ सुविधा पूर्व निर्धारित मोटर शाफ्ट गति छ।
व्यावसायिक को परिपत्र आरी विशेष विभाजन चक्कु, को Jamming रोक्न जो संग सुसज्जित छन् को देख्यो ब्लेड। यो तत्व पछि स्थित र डिस्क को क्षेत्र मा लिङ्क गर्न कटौती गर्ने देख्यो बनाउँछ छ।
त्यहाँ एक स्थिर मिसिन रूपमा शक्ति आरी डिस्क प्रयोग गर्न धेरै साधारण छ। यसो गर्न, तिनीहरूले समाधान को पीठ मा Clamps, को देख्यो ब्लेड लागि स्लट छ कि एक तालिकाको शीर्ष मा राखिएको। त्यसैले, एक काटन कार्य मिसिन।
Makita परिपत्र देख्यो
Makita उपकरण निर्माण डबल इन्सुलेशन संग प्रदान गरिएको छ। यो सुविधा तिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउँछ। यो जडान तिनीहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ बगैंचामा, तर पनि घर मा मात्र होइन। साथै, यो मोडेल प्रयोगकर्ता थप देख्यो ब्लेड खरिद गर्ने क्षमता दिन्छ।
ब्याट्री "डेल्टा": विवरण, विशेषताहरु, उत्पादकहरु र समीक्षा
Abrasives - यो के हो?
कूलर के छ र के कार्यहरु यो कार्य?
ड्रिल गर्न ठोस ड्रिल बिट
उपकरण डोनट: छनौट र व्यापार समीक्षा सुझावहरूको
बच्चा मा जिब्रो-टाई: वा छैन prune गर्न?
पुरुष लागि खेल आहार
अवलोकन Renault Clio कार
कसरी "Windows द्वारा रिजर्भेसन" (डिस्क) लाई Windows7मा हटाउनुहोस्
होटल 5: * स्टेला Makadi Garden Resort (मिश्र, Makadi)। होटल विवरण, समीक्षा
प्रभावकारी आंत्र घरमा नुन पानी शुद्ध पार्नुभएर
Obstetric जेल "Dianatal" (Dianatal): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
आकर्षण Biysk। शहर Biysk, Altai Krai
Oblomovshchina एक चरित्र, जीवन को एक तरीका या एक विश्वव्यापी छ?